အုပ်စုပွဲစဉ်တွေကို အကောင်းဆုံးဖြတ်ကျော်ပြီး လီဗိုဆာ အောင်မြေမှ ပေါ်တူဂီ သားတို့ရဲ့ ဟစ်အော်သံများ.... - YTV Channel
Home | Sports | အုပ်စုပွဲစဉ်တွေကို အကောင်းဆုံးဖြတ်ကျော်ပြီး လီဗိုဆာ အောင်မြေမှ ပေါ်တူဂီ သားတို့ရဲ့ ဟစ်အော်သံများ….
အုပ်စုပွဲစဉ်တွေကို အကောင်းဆုံးဖြတ်ကျော်ပြီး လီဗိုဆာ အောင်မြေမှ ပေါ်တူဂီ သားတို့ရဲ့ ဟစ်အော်သံများ….
ဒီမနက်အစောပိုင်းမှာ နေးရှင်းလိဂ် ရဲ့ (Group-2)ပွဲစဉ်ဖြစ်တဲ့ ပေါ်တူဂီအသင်းနှင့် ချက်စ်အသင်းတို့ ယှဉ်ပြိုင်ကစားခဲ့ကြပြီး ပေါ်တူဂီဖက်မှ ၄-၁-၄-၁ ဖော်မြူလာနဲ့ အဓိကကစားသမားတော်တော်များများကို ထည့်သွင်းလာခဲ့ပြီး ချက်စ်ဖက်မှလဲ ၃-၄-၃ ဖော်မြူလာဖြင့် ပေါ်တူဂီအသင်းကိုရင်ဆိုင်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ကြပါတယ်...ပွဲစဉ်တစ်လျှောက်ပေါ်တူဂီဖက်မှ အကောင်းဆုံးတိုက်စစ်ဆင်ကစားသွားခဲ့ပြီး ချက်စ်ခံစစ်ရဲ့ ကျစ်လျစ်မှုကို ဖြိုခွဲနိုင်ခဲ့ကြပါတယ်...ပထမပိုင်း မိနစ် ၃၀ အကျော်မှာတော့ ကန်ဆယ်လိုရဲ့ နောက်တန်းကနေ တစ်ဟုန်ထိုး တိုက်စစ်ဆင်မှုကနေ ကန်သွင်းသွားခဲ့တာကြောင့် ချက်စ်တို့အနေနဲ့ ခွင့်ပြုပေးလိုက်ရပြီး နောက် ၅ မိနစ် အကြာမှာ ဗာနန်ဒို ဆေးလ်ဗားလ်ရဲ့ အကွက်မြင်ပေးပို့မှုကို ဂူးဒကစ်ကသေသပ်စွာ အဆုံးသတ်ပေးလိုက်တာကြောင့် ချက်စ်တို့အနေနဲ့ ပထမပိုင်းမှာတင် နှစ်ဂိုး ဂိုးမရှိနဲ့ အရေးနိမ့်နေခဲ့ပါတယ်...
ဒုတိယပိုင်းပြန်လည်စတင်ချိန်မှာတော့ ပေါ်တူဂီအသင်းအနေနဲ့ ကစားသမားသုံးဦးအထိ လှဲလှယ်ပြီး ကစားအားကိုထိန်းကစားဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြပါတယ်..ထင်သလိုဖြစ်မလာပဲ ချက်စ်အသင်းရဲ့ တိုက်စစ်ဆင်မှုတွေကို ပိတ်ဆို့ကစားခဲ့ရပါတယ်... ချက်စ်အသင်းဖက်မှ အပိုင်အခွင့်အရေး နှစ်ကြိမ်ရရှိခဲ့ပေမယ့် ဂိုးအဖြစ်မပြောင်းလဲနိုင်ခဲ့တာကြောင့် ပိုပြီးရုန်းကန်ခဲ့ရပါတယ်...ပေါ်တူဂီဖက်မှလဲ ရိုနယ်ဒိုအနေနဲ့ အခွင့်အရေးတစ်ချို့ ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပေမယ့် ချက်စ်ဂိုးသမားရဲ့ လက်စွမ်းပြကာကွယ်မှု‌တွေကြောင့် အခွင့်အရေးတစ်ချို့ဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်....
ပွဲပြီးဆုံးခါနီးထိ အကြိတ်အနယ်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ကြပေမယ့် ချက်စ်တို့အနေနဲ့ ပေါ်တူဂီမြေမှာ မလွှဲသာပဲရှုံးနိမ့်ခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်...ပေါ်တူဂီအနေနဲ့ အဆိုပါနိုင်ပွဲကြောင့် အုပ်စုဗိုလ်အဖြစ် ဆက်လက်ရပ်တည်နေပြီး စပိန်ကို နှစ်မှတ်အသာနဲ့ အုပ်စုအဆင့်မှာ ဦးဆောင်နေနိုင်ခဲ့ပါတယ်...တစ်ရက်နှင့်တစ်ရက်နေရှင်းလိဂ်ရဲ့ ပြိုင်ပွဲတွေကတော့ ပိုမိုပြင်းထန်လာပြီပဲဖြစ်ပါတယ်...ကွာတားကို ဘယ်အသင်းတွေရောက်ရှိသွားမလဲဆိုတာကိုတော့ ဆက်လက်စောင့်ကြည့်ရင်း မနက်ဖြန်သတင်းတွေမှာ ဘာအကြောင်းအရာလေးတွေပါမယ်ဆိုစောင့်မျှော်ပေးပါဦးနော်....